Install DVWA on Kali Linux 2017 - Khit Minnyo
Hacking Lab Install DVWA on Kali Linux 2017
Install DVWA on Kali Linux 2017
by KhitMinnyo on September 12, 2017 in Hacking Lab
Install DVWA on Kali Linux 2017.1 ( + errors solutions)
What is DVWA? (Zawgyi)
DVWA ကို install မစတင်မီ DVWA ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အနည်းငယ် ဖော်ပြပေးလိုပါတယ်
DVWA ဆိုတာက Damn Vulnerable Web Application ကို အတိုကောက် ယူသုံးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ vulnerable ရှိနေတဲ့ web application တစ်ခုလို့ အလွယ်ဆုံး သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
DVWA ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Security Professionals တွေ အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ skill တွေကို Legal environment မှာ စမ်းသပ်နိုင်စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် Web Developer တွေအတွက်လည်း Web App တွေကို Secure ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် process တွေအပေါ် ပိုမို နားလည်လာစေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ Teachers & Sutdents တွေအတွက်လည်း သူတို့တွေရဲ့ Classroom Environment မှာပဲ Web Application Security ကို သင်ကြား/သင်ယူနိုင်စေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
ခု ဖော်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့တာလေးတွေကတော့ DVWA ဆိုတာ နဲ့ သူ့ကို ဘာကြောင့် သုံးလဲ ဆိုတာ (သုံးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်) တွေကို အကြမ်းဖျင်း ဆွေးနွေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်
Kali Linux 2017.1 မှာ DVWA ကို ဘယ်လို install မလဲဆိုတာကိုတော့ Movie ထဲမှာသာ ကြည့်ရှုပေးပါ
What is DVWA? (Unicode)
DVWA ကို install မစတငျမီ DVWA ဆိုတာနဲ့ ပတျသကျလို့ အနညျးငယျ ဖျောပွပေးလိုပါတယျ
DVWA ဆိုတာက Damn Vulnerable Web Application ကို အတိုကောကျ ယူသုံးထားတာဖွဈပွီးတော့ vulnerable ရှိနတေဲ့ web application တဈခုလို့ အလှယျဆုံး သတျမှတျနိုငျပါတယျ
DVWA ရဲ့ အဓိက ရညျရှယျခကျြကတော့ Security Professionals တှေ အနနေဲ့ သူတို့ရဲ့ skill တှကေို Legal environment မှာ စမျးသပျနိုငျစဖေို့ ဖွဈပါတယျ
ဒါ့ပွငျ Web Developer တှအေတှကျလညျး Web App တှကေို Secure ဖွဈအောငျ လုပျဆောငျနိုငျမယျ့ process တှအေပျေါ ပိုမို နားလညျလာစဖေို့ ကူညီပေးပါတယျ။
Teachers & Sutdents တှအေတှကျလညျး သူတို့တှရေဲ့ Classroom Environment မှာပဲ Web Application Security ကို သငျကွား/သငျယူနိုငျစဖေို့ ကူညီပေးပါတယျ။
ခု ဖျောပွ ဆှေးနှေးခဲ့တာလေးတှကေတော့ DVWA ဆိုတာ နဲ့ သူ့ကို ဘာကွောငျ့ သုံးလဲ ဆိုတာ (သုံးရတဲ့ ရညျရှယျခကျြ) တှကေို အကွမျးဖငျြး ဆှေးနှေးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ
Kali Linux 2017.1 မှာ DVWA ကို ဘယျလို install မလဲဆိုတာကိုတော့ Movie ထဲမှာသာ ကွညျ့ရှုပးပါ
sources list တွေကတော့ (sources list တှကေတော့)
deb http://mirrors.dcarsat.com.ar/debian/ jessie main
deb-src http://mirrors.dcarsat.com.ar/debian/ jessie main
deb http://mirrors.dcarsat.com.ar/debian/ jessie-updates main
deb-src http://mirrors.dcarsat.com.ar/debian/ jessie-updates main
အထက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ (အထကျပါအတိုငျး ဖွဈပါတယျ။ )
Movie ထဲမှာပါတဲ့ sql db create လုပ်တဲ့ command တွေကတော့
(Movie ထဲမှာပါတဲ့ sql db create လုပျတဲ့ command တှကေတော့)
root@kali:~# mysql -u root -p
mysql> CREATE USER 'user'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY 'p@ssw0rd';
mysql> grant all on dvwa.* to 'user'@'127.0.0.1';
All in One Hacking Training ၏ ပင်မ စာမျက်နှာသို့ သွားရောက်လိုပါက
>>>> Click Here to visit All in One Hacking Training <<<<
Hacking လေ့လာမှုတွေ တိုးတက် ကောင်းမွန်ပါစေဗျာ
Hacking လလေ့ာမှုတှေ တိုးတကျ ကောငျးမှနျပါစဗြော
By KhitMinnyo on September 12, 2017